Happy cusub SMS doonayo sanadkii 2018 - Lovesmsbd.com | New Bangla SMS
Home Unlabelled Happy cusub SMS doonayo sanadkii 2018
Happy cusub SMS doonayo sanadkii 2018
1.) Xitaa in saacadaha muqdiga noloshaada, waxaan istaagi doonaa by dhinaca haysta gal laambadda keliya iyo iftiin ilaa dhammaan goobaha non-ciinwaanka. Ilaah waad maydhan kartaa Khayrna ee dunida oo dhan! Happy New Year 2018!
2.) Rajaynaynaa kuwaas rabitaanka wanaagsan caawiyo in aad si ay ugu dabaal ah Year New xiiso leh iyo sixir. Aad ee raba Year aad u faraxsan New.
3.) Shifo in sanadka cusub, taas oo rajeyneynaa waxaa ka buuxsami doona nasiib wacan iyo farxad. Happy New Year!
4.) Distance laga yaabaa in lagu na kala hayo laakiin qalbiyadeenna wada jira. Year New Happy inay farxad u ah nolosheyda!
5.) laga yaabaa in sanadka cusub waxaa ka buuxsami dhalaalka iyo rajo si gudcur iyo murugo aad ka fogaadaan. Happy New Year!
6.) Rajaynaynaa in aad Year New waxaa ka buuxsamay guul, caafimaad, barwaaqo iyo farxad. Happy New Year!
7.) Waxaa laga yaabaa in sanad weyn oo farxad wayn iyo nasiib buuxiyey! Joog caafimaad wanaagsan iyo gaaraan meel ka mid ah guul. Aad ee raba sano cajiib ah ka hor!
8.) Waa Year New iyo waqtiga ugu fiican in la cusboonaysiiyo qaamuus nolosha. Ka saar erayo kale oo masayrka, nacaybka, aargoosiga, damac ka qaamuus oo ku beddeli erayada sida jacaylka, daryeelka, u naxariistay, daacadnimo iyo qanacsanaanta. Tani waxay xaqiijin doontaa in aad qabtid sano weyn iyo xadgudubka-free ka hor.
9.) aad Lahaanshaha ee noloshayda ii damaanad-qaaday in aan qof in ay ku xidhan iyo wac ilaa in times of baahida loo qabo. Sida sanadkan uu dhamaado, waxa aan arki sannad kale gelida galay nolosheena fursad kale waxaa jiri midba midka kale na siinayo. Happy New Year!
10.) Waxaa jira waxyaabo badan oo adduunka ah weli la arag iyo khibrad. Live noloshaada, sahamiyaan jahooyinka cusub, tag, waayo, adventures cusub sannadka cusub oo ku aadan ka xumaan doonaan.
11.) fariin Tani waa si uu u gudbiyo salaan tiiraanyo leh adiga iyo qoyskaaga in. Rajaynaynaa in aad lahaa sanad weyn oo ay leeyihiin doonaa xataa mid ka fiican waqtigan. Waqti la qaado kuwa aad u dhow oo aan jecel. Ku raaxayso!
12.) brand cusub sanad kale oo halkan waa sidaas nasto tamartaa aad iyo aad u hesho set inay ku raaxaystaan. Dayacayo dhamaan walwal, shaki iyo cabsi ah oo kaliya raacaan siyaasadda ee qososhay, jacayl, live.
Gaab 13.) 2018 waa uun agagaarka geeska, waxaa maskaxda ku hay in aad hal mar oo keliya ku noolaan, noloshu waa, xeerarka waxaa loogu tala galay in la jebiyo oo xiiso leh iyo in la abuuro xasuus waa in loo xisaabayaa oo dhan.
14.) Tani Year New aan doonayo kuu waa maalmo in ay yihiin kaaftoomi free, ee ku hay in waa warka culus oo lacag la'aan ah oo jecel in uu yahay xaalad free.
15.) Aan doonnaa xallinta New Year inaan halkaas for kasta oo kale oo ku caawin aadanaha la shaqayn jiray u baahan xitaa haddii iyaga ku garanaysaan waxaan aadan shakhsi ahaan. Sidaas daraaddeed waxaa iman doona aynu ku faafay naxariis qaar ka mid ah oo ka farxiyaa!
16.) qorraxda cusub ee sanadka cusub ee idiin keeni laga yaabaa in xoog iyo nashaadka halka moon cusub ee Year New aad u keenaya nabadda iyo xasilloonida!
17.) Rajaynaynaa in maalinta la joogo kasta oo wanaagsan sanadka cusub u adeegtaa sida maal qaali ah oo berri ka wanaagsan. Ku raaxayso sannadka cusub.
18) Dhammaan dhex maray sanadihii hore waxaan u qabsan laheyd oo cun jahannamada kaa. Maanta, bilowga sanadka cusub Waxaan doonayaa in aan idiin Yaboohi waxaan u tegayaa inaan sii wado aad u sannadkan waxa ay qabanayaan. Nasiib wacan la socda!
19.) Xitaa haddii ay sannad cusub oo wax isbeddeli karaan, waxaana rajeynayaa inaan sii wadno iskaashi iyo xidhmaddaas sii hufan oo sannado badan oo soo socda. Aad doonayso hal sano oo cusub oo weyn!
20.) Years yimaadaan oo tagaan, laakiin sannadkan waxaan si gaar ah u rabto inaad ku labanlaabtaa dose ee caafimaadka iyo farxad kaalinta badan oo dhan jacayl. Happy New Year!
21.) garaaca garaaca! Anigu waxaan ahay sanadka cusub oo aan halkan oo dhan jacayl, farxad, Barakada iyo nasiib wanaag idiin ahay. Ee iga daa gacmo furan.
22.) Years imaan kara iska tegi laakiin saaxiibtinimo socon doonaa inta uu nool yahay oo aan marnaba noqon doonaa cadaawayaashaada. Sidaa darteed, ka hor inta qorraxdu soo helo si ay u dejiyaan, waxaan aad doonaya ah Year New faraxsan oo heer sare ah.
23.) Sida aan ka gali baxay sanadkii hore iyo gasho sanadkan, aniga oo kuu soo dirayaa rabitaanka tiiraanyo leh ka buuxa jacaylka, nasiib, farxad iyo rayraynta. Happy New Year!
24.) Rajaynaynaa in dhammaan dhibaatooyin iyo xanuun aad socon keliya inta aad qaraarada New Year. Happy New Year!
25) Waxaa jira albaab unbolted aad sugaya la tuulmooyin burbur ah fursadaha dhinaca kale waxaa ka mid ah. Midhadh qabtay kuwii Year New this oo ay leeyihiin sanad guul ka hor.
26) Ilaah waad maydhan kartaa 12 bilood farxad, 52 toddobaad Raaxo, 365 maalmood oo ah guusha, 8760 saacadood oo nasiib wacan, 52600 daqiiqo oo caafimaad wanaagsan iyo 31536000 ilbiriqsi ee ecstasy iyo Nicmo! Happy New Year!
27.) Year New waxaan ahay Boogaadin bangi u socdaan in ay i siiyo amaah weyn ka dibna weligiis i illoobin. Ha ii soo sheeg haddii aad ka heli mid ka mid ah! Happy New Year btw!
28) Sida dunida oo dhan nagu wareegsan koraa ka weyn by sano ah, waxaan rajaynayaa in aad hantidaan qalbi in weli sidii dhallinyaro ah oo faraxsan sida had iyo jeer.
Messages Year New
29.) Waxaa laga yaabaa in sanadka cusub this waxa uu noqon doonaa mid ka mid ah in buuxiyo riyooyin oo dhan, iyo sidaa daraadeed waxa uu bilaabo farxad iyo naf firfircoon! Halkan ka aad doonaya sanad barwaaqo cusub!
30.) Waxaan doonayay in ay joojiyaan dhammaan propensities aan xun ee sannadka soo kor oo soo socda, si kastaba ha ahaatee ka dibna waxaan fahamsan yahay in mid ka mid ma jecel yahay khasaare ah.
31.) oo dhan seconds, daqiiqo, saacadaha, maalmaha, todobaad iyo bilood ee sannadka cusub waxa aad keeni laga yaabaa farxad iyo nasiib aad u weyn! Happy New Year!
32.) Waa in aan Ilaah ugu mahad naqayaa, waayo, weli furan bogga kale oo cusub oo ka mid ah nolosheena. Rajaynaynaa in ay ku noolaadaan daqiiqad kasta si buuxda.
33.) Halkan waa hadiyad ka mid ah jacayl, ku duudduubtay oo leh daryeelka, xidhxidhnaa leh niyad fiican iyo shaabadeeyey rabitaanka tiiraanyo leh. Happy New Year!
34.) maalin kasta oo sannadka soo socda keenaan laga yaabaa farxad, farax iyo kadis macaan on your marinkeeda! Aad iyo dhallaankoodii oo dhan gacaliyo aad ah Year New heer sare ah doonaya.
35.) Ha illoobin oo dhan xanuun, murug, iyo fashilaad ee sanadkii la soo dhaafay. Ku soo dhawoow sanadkan isagoo dhoolacadeynaya run iyo weyn. Happy New Year!
36.) Year New waa waqtiga ugu fiican in ay kala fur jahooyinka cusub oo ogaaday dhan riyooyin. Dib, xoog iyo geesinimada beenta aad gudaha iyo sii wadaan in ay horay u socdo.
37.) ha idin barakeeyo sanadkan cusub
nabad hoose, jacaylka runta ah iyo farxad Shuruudi!
38.) On sannadka cusub, aynu eegno dib oo dhan xasuus diiran, dareemaan faani guulaha iyo qaato cashar ka khaladaadkii aan galnay hore. Ma sano ah madadaalo aan dhammaadka lahayn iyo laugher ka buuxsamay.
39) Ka hor qorrax ka soo baxa oo qorraxda ugu horeysay ee 2018, i sii daa aan rinji oo dhan rays ee Barakooyinka guul iyo farxad kuu. Halkan ka aad doonaya ah Year New cajiib ah!
40.) Sida aan wada galaan Year New this, aynu yabooho in ay had iyo jeer waxaa jiri for kasta oo kale oo ku kici kor ku xusan dayr kasta oo khaladkaasi. Happy New Year!
41.) Marka aad on waddada guusha, qaanuunka ugu muhiimsan waa in weerarka oo aan marnaba dib ay u eegto. Inaad gaadhaan aad gool oo ay leeyihiin safar wanaagsan tahay!
42.) In Year New this, aynu yabooh baxo uuna si. Yabooh in ay qof fiican aadanaha, qof qoyska ka fiican iyo ugu muhiimsan muwaadin fiican u ah dalka.
43.) Habeenada waa madow, laakiin maalmood waa dhalaalaya, madaxa iyo wadnaha ku hay meel waa dhab. Ha heli murugo sida ay tahay ku dhawaad dhow. Haa! Waxaan ka hadleynaa ah Year New soo socda.
44.) Rabitaanadayda kuu fiican yihiin oo kaliya kuma koobna in ay sanadka soo socda, laakiin sannado badan si ay u yimaadaan. Waxay leeyihiin a Year New ruxid!
45.) 2017 waxaa soo baxay ... Year New 2018 waxaa ku soo socda! Ma jeedo maroojin ah, markeeda a iyo cayaaraan habeenka oo dhan. Aad ee raba 365 maalmood ee wadarta xiiso leh iyo Raaxo.
46.) Haddii aad ku faraxsan tahay, dabaal Sannadka Cusub la dhoola on wajigaaga. Haddii aadan ku faraxsanayn, weli sidaa sameeyaan si ay u kuwa aad u dhow oo gacaliyo ilka Year New this.
47.) Waxaa jira waxyaabo ka hadhay ugu cuslaa, ama waxyaabo qaar ka mid ah ka tagay sheekeyn laakiin waxa aan la tegi karaa ugu cuslaa, waxaa aad u doonaya ah Year New faraxsan.
48.) mahadi in aad arki karin Sanadka Cusub ee noloshaada mar kale. Baro ka duleella ee la soo dhaafay, oo waxay qaadan on dunida in jinniyadu ay sare!
49.) aad ee raba Year aad u faraxsan New! Dabaal maalinta la kuwa aad jeceshahay iyo giraanta sanadka cusub badan oo farxad!
50.) Ilaah adiga iyo kuwa qaaliga ah ee aad la dhan jacayl, nasiib iyo farxad in dunida maydhan kartaa! Rabitaanka Best iyo xilliyo Salaan for Sannadka Cusub inaad iga.
51.) Munaasabaddan loogu dabaal degayay, rajaynaynaa in aad haysato a heer sare January, nabad February, raaxo March, April qurxoon, stress-free May, farxadda June, ku faraxsan July, u duceeyey August, September cajiib ah, oo iidaya October, November fiican iyo ugu dambeyntii ugu farxadda badan ee December! Oo laakiin ugu danbeysay ee aan ugu yaraan oo dhan, waxay leeyihiin Year New ugu xiiso leh iyo soo jiidasho badan.
Messages Year New iyo SMS
52.) Xitaa haddii qorrax kasta ka qaada maalin ka nolosheena, qorrax ka soo baxa kasta waxa ay maalin cusub, yididiilo iyo fursado gaar ah noo buuxsantay. Ka faa'ideyso maalin kasta si awood buuxda.
53.) Qofna tegi kartaa dib ugu time in la beddelo mid ka mid ah ayaa unu ama khalad. Sidaas joojiyo fikirka ku saabsan la soo dhaafay, ka shaqeeyaan joogo si uu u sameeyo mustaqbal ifaya.
54.) Waxaad tahay oo ku saabsan in ay jeer kaga fiican, fiiri ee la soo dhaafay oo dhan sababaha demotivating ka mid ah noloshaada iyo ka hor ku dadaalaan.
55.) gaadhi baal kuwa oo xumaada ay sarrayntiisu cusub! Barwaaqoobi iyo Bloom aad buuxda this Year New.
56.) ha farxad guryihiina iyo diirimaad aad qalbiga. Sida wajiyada sanadka cusub, rajaynaynaa in ay keentaa oo ay la socdaan warka wanaagsan oo jecel idiin!
57.) Sida Year New u arko waddadiisa iyada oo habeen qaboobaha baraf, halkaan idiin dirayaa hello diiran iyo hab a dhagan! Happy New Year!
58.) Waxaad tahay ku riyooda,
oo aad tahay yeela.
Aad u oofiyo oo loo gaaro guulaha waaweyn,
iyadoo sanad kasta teesto ah.
All ugu wanaagsan ee sannadka cusub.
59.) koobanahay sheekada ugu weyn ee aad awooddid naftaada. Fur buug cusub ee sanadka cusub iyo bilaabaan qoraal ah!
60.) maalin kasta in aad toos, hortiisa muraayad adigu waxaad ku farxi May iyo markeeda aad ku farxi ku alla kii idin la kulmaanna! Soor ee farxad iyo farxiyaa this Year New!
61.) Sida waagu ka mid ah wajiyada sanadka cusub, waxa aad ballan ka wanaagsan iyo fulinta berri.
62.) Ha illoobin oo dhan waayo aragnimo xun ee sanadkii hore iyo sugaynaa in waxyaalaha ku faraxsan lagu kaydiyey kuu.
63.) Shifo in sanadka cusub soo baxaya! Leedahay mid ka mid ah xiiso leh!
64.) Year New ma aha oo kaliya ku saabsan beddelo taariikhaha laakiin jiho oo dhan. Waxaa laga yaabaa in sanadka ka dhergi doonaan Kalsoonaada iyo gaiety.
65) Waxaa laga yaabaa jeer xun keeno ray ku rajo this Year New.
66.) sanadka cusub keeno Waxaa laga yaabaa in rajo cusub, qaraarada cusub iyo farxad cusub.
67.) Sida sanad dhammaado, oo dhan iyo dhibaatooyin dhaleeceynta sidoo kale laga yaabaa, waxaa laga yaabaa in sanadka cusub gayaysiin in kaliya oo dhan in ay yihiin wanaagsan.
68.) maalin kasta oo sannadka cusub ee idiin keeni laga yaabaa kadis ah u wacan sida Tent laab laab of ubax oo kala udgoonka udgoon si tartiib ah sida ay u muuqanayo lakabka by lakabka.
69.) sanadka cusub keeno Waxaa laga yaabaa in aad ogaaaday jidka fursado in laguu ogolaado in aad u tidicdo sheekooyinka guusha.
70.) Sida dunida koraa sannad kale ka weyn waxaan jeclaan lahaa inaad leedahay qalbi in weli dhallinyaro ah oo farxad Year New had iyo jeer. 76.) Year New taasu weligaa ha murug iyo naxdin hadhaysaa aad Hufnaan iyo positivity, waayo, taasu waa akhlaaq dambe oo kaa caawin lahaa in ay keenaan in qorax in aad noloshaada. Year New Message Year New Message
77.) Xusuusnow in sanadka cusub ma noqon kartaa kaamil ah. Laakiin waxaad u baahan tahay in ay iska indha xun iyo qabsanaysaa positive ah.
78.) Year New Tani aad quusin karaa naftaada iyo foomka saaxiibtinimo weligiis ah naftaada.
79.) maalin kasta oo sannadka cusub ha loogu dabaal kula hareereysan kuwa daryeela.
80.) Year New Tani waxaan jeclaan lahaa inaad leedahay maskax furan, waayo, ma garan kartid waxa nolosha kadis yar tuura laga yaabaa in aad jidka.
81.) Year New Tani waxaan rajaynayaa in tallaabo kasta oo aad qaadato waxaa lagu hanuuniyey by barakooyinka Ilaah.
82.) No Year noqon kartaa sariir of Ubax. Laakiin waxaan aad doonayso inaad geesinimo iyo kalsooni ay ku soo noqdaan caqabad kasta fursad u galay inta lagu guda jiro sanadka cusub soo socda.
83.) Year New ha ahaadeen sida nuurka qorraxda, iyo sida udgoon sida ubaxa.
84.) May riyooyin oo dhan ka soo noqdo sanadkii la soo dhaafay soo galeen guulaha inta lagu guda jiro sanadka cusub this.
85.) Year New Tani sida aad dhinaca fulinta riyooyin oo dhan cabsi ma iman karto in hab aad si loo joojiyo aad jidka.
86.) sanadkii hore iska qaadan karaa oo dhan murug iyo degaya sida by tagaa oo maalmaha soo socda hadda iyo mar walba ka buuxi la qorax iyo farxad.
87.) Year New Tani waxaa laga yaabaa in jacaylka badan ee saaxiibtinimada iyo wehel wakhti kasta oo aad Fidiyo idinkaa gacanta weli adag oo aad ka heli.
88.) guul dhab yimaado oo kaliya kuwa diyaar u. Sidaas marnaba Dib oo had iyo jeer ku dhiirranahay inaan aqbalaan loolan cusub. Aad ee raba sano ah oo aad u faraxsan cusub 2018.
89.) ha ii aad rabto Year aad u faraxsan New hor khadadka telefoonka aad u buuxda oo internet deldelay. Happy New Year 2018!
90.) Aan leeyihiin xisbiga Haqoosna waxa la joogaa wakhtigii Year New. Dabaal Happy New Year 2018 ila habeenkii oo dhan, si aan u soo wada afjari karo sanadka oo wada bilowdo sanadka cusub.
Laambadihii farxadda laga yaabaa, iftiimin noloshaada iyo maalmaha aad ka buuxin
ee sparkles dhalaalaya nabadda, rayraynta, iyo niyadsamida. Happy New Year ..................... faraxsan farriimaha sannad cusub oo saaxiibo
aan kula kulmay jacayl, caafimaadka, nabadda iyo farxadda,
waxay loo baahan yahay meel joogto ah inuu sii joogo.
Oo waxaan iyaga siiyey ur cinwaanka rajo ay si nabad ah ku yimid.
Wax kasta oo u dhiiri,
wax kasta oo taas oo macnaheedu yahay inta badan 2 u,
wax kasta oo ka dhigaysa u ilka & u keentaa farxad ........................... ..best rabitaanka faraxsan sannadka cusub ee saaxiibada
i jeclaan 4 u sannadka cusub.
Sida 2017 caleemo, waxay qaadi laga yaabaa in ay la dhan murug iyo walwal aad.
Sida 2018 soo gaaray, waxa aad la soo dejin laga yaabaa in farxad unadulterated iyo barwaaqo.
Waxaa laga yaabaa in sanadkan cusub keenayaa kaliya farxad aan ku jeexjeexi,
Qof walba jecel yahay oo kaliya aad u jeclahay,
dhibaato dhammu waxay noqon doonaan dhameysan
Waa for doonayo inaad ii sanad cusub gaarka ah ee .................... ........ faraxsan farriimaha sannad cusub
In sanadkan cusub Happy.
Ha noqon qof ka wanaagsan aadanaha,
nin qoys wanaagsan,
oo muwaadin ah ugu yaraan ka fiican 2018 ..
Ilaah nabadgelyo 2017!
AAP liye k sirf 3 lafz
QANACSANAYN NEW YEAR || msgs sannad cusub oo Hindi ||
Habeenada waa madow laakiin Days waa Light,
habeen waa madow laakiin Days waa Light,
Jeclaan aad Life had iyo jeer waxay noqon doontaa Bright.
Haddaba sidaas daraaddeed ayaan Gacaliye aadan helin cabsan
Haqoosna, Ilaah Gift noo ah "cusub YEAR".
KU QANACSANAYN NEW YEAR
wax waa laga tegi karaa oo kulli
erayadii Qaar ka mid ah waa laga tegi karaa sheekeyn
dareenka Qaar ka mid ah waa laga tegi karo lama sheegin
, laakiin qof aad sida marna waa laga tegi karaa.
Waxaan jeclaan lahaa ua Happy New Year 2018 ................. fariimaha ku faraxsanahay sannad cusub oo gabar
Sada rahe barte warkiisii ki AAP,
Aur mile badan oo xiiso leh & masti.
Jeclaan lahaa inaad a..Happy sanad cusub la
Plenty nabadda & barwaaqo .......................... faraxsan msgs cusub sannad Hindi
Ma ummid ka sath aao bhulke lagu lisay ka Ciridka
sannadka cusub ee 2018 ko Hum SAB Kåre danohooda-IMAN!
Jo in chahe wo tera ho,
Naya Saal Mubarok ho tuje Diintooda Yaar.
Wax aad dhoola taas oo ku hadla ii,
Wax aad codkii gabyaa ii,
Happy New Year !! ........................ cute new year sms for girlfriend
Also Wish U Great Days In 2018
Happy New Year !!.........................best happy new year wishes for friends
Make your New Year a blast of fun! Celebrate the new beginning with
fireworks and greet your friends and family on the eve of new year 2018
Here is wishing you a Happy New Year............................best happy new year sms
Remove Hate, Lust, Jealousy, Grudge, Animosity, Greed from your dictionary this new year's eve
Here is wishing you a very happy new year.......................best happy new year wishes sms
Happy New Year 2018................................best happy new year sms
“Happy new year”......................best happy new year sms in hindi
May God bless you. Wish you a very happy new year....................................best happy new year sms for friends
Throughout the Coming Year may your life be filled with little celebration of Happiness...
Wishes you a Bright, Happy and Prosperous New Year 2018 with God Bless..
It’s new year ! Happy new year 2018
new year sms in ,new year sms for girlfriend ,happy new year message sample ,new year sms 2018 ,new year wishes for friends ,happy new year message in gujarati ,new year messages 2017 ,funny happy new year message